शिक्षा/स्वास्थ्य – Page4– MeroJilla.com
गोकर्ण सुवेदीको अध्यक्षतामा ठूलीपोखरी पोखरा सम्पर्क समिति गठन Sunday, October 7th, 2018
पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं। १२ घर भएर बिभिन्न कारणले पोखरामा बस्दै आएका ठूलीपोखरीबासीहरुले ठुलिपोखरी पोखरा सम्पर्क समिति स्थापना गरेका छन । रोजगारी, अध्ययन लगायत अन्य शिलशिलामा पोखरामा बस्दै आएका उनीहरुको शनिबार भएको भेलाबाट समिति गठन भएको हो । समितिकी सहसचिब तथा संस्थाकी प्रेस संयोजक सबिताकुमारी शर्माका अनुसार नवगठित समितिको अध्यक्षमा गोकर्ण सुवेदी,..
पर्वतः नगरशिक्षाको अनुगमनले शिक्षामा सुधार ।
रामकृष्ण लामिछाने पर्वत । कुस्मा नगरशिक्षा शाखाले यहाँका प्रत्यक सामुदायिक र निजी स्रोतका विद्यालयहरुको अनुगमनलाई तिब्रता दिन थाले पछि शिक्षामा सुधार आउनथालेको छ । भने,शैक्षिक सस्थाहरुको अवस्थामा सुधार आउन थालेको छ । कुस्मा नगरपालिकामा ६७ वटा सामुदायिक विद्यालय र १४ वटा निजि स्रोतबाट सञ्चालनमा रहेका विद्यालय रहेका छन् । नगरशिक्षा अधिकृत राजेन्द्र बहादुर..
जग्दम्बा प्राविका सवै विद्यार्थीहरुलाई पोशक र कम्पुयुटर प्रदान । Saturday, October 6th, 2018
कुस्मा ,खुर्कोट । कुस्मा नगरपालिका २ मा रहेको जग्दम्बा प्राबिका विद्यार्थीहरुलाई शुक्रबार पोशक तथा कम्पुयुटर वितरण गरिएको छ । कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले आफ्नो सेवा वापतको खर्चले उक्त विद्यालयका २५ जना दलित तथा अति विपन्न समुदायका विद्यार्थीहरुलाई उनले सो प्रदान गरेका हुन् । पोशक बितरण गर्दै उनले शिक्षामा जोड् दिनुपर्ने वताए । शिक्षाले समाजको रुपान्तरण..
दैनिक डेढ सय विद्यार्थी विदेश Friday, October 5th, 2018
काठमाडौँ — उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या दिनहुँ बढदो छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार दैनिक १ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी विदेश उड्ने गरेका छन् । मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति व्यवस्थापन शाखाले नेपाली विद्यार्थीले ७६ वटा मुलुकमा पढ्न जान स्वीकृति लिने गरेको जनायो । उक्त शाखाले विदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) र..
स्वर्गको कार्यशाला बजारमा । Thursday, October 4th, 2018
सार्वभौम दर्शनका लेखक कुलराज पौडेल (रुपक) द्धारा लिखित स्वर्गको कार्यशाला र सार्वभौम नीति बजारमा आएका छन् । स्वर्गको कार्यशाला पुस्तकमा सम्पुर्ण भुगोलकै हितका लागि, दिगो विश्व शान्ति र स्थायित्वको लागि आवश्यक उपाय, पद्धतिहरुको राम्रो अभिव्यक्ति गरिएको छ । पृथ्विका विषय बुँदाहरुलाई स्वर्गिय सभामा पेश गरिएको प्रशंग छ । विविध अलौकिक प्रसंगहरु यस भित्र पाईन्छन् । यो विश्व..
रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकलाई Wednesday, October 3rd, 2018
काठमाडौं। . यो वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीनजना वैज्ञानिकहरुलाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरिने भएको छ । अमेरिकाका फ्रान्सिस् आर्नोल्ड र जर्ज पी स्मिथ तथा बेलायतका ग्रेगोरी विन्टरले प्रोटिन अनुसन्धानमा गरेको योगदानको कदर गर्दै बुधबार यो पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो । यी रसायनशास्त्रीहरुले नयाँ प्रोटिन बनाउने प्रविधिको प्रयोग गरेका थिए ।..
एन्टिबायोटिक औषधिले काम नै नगर्ने अवस्था आउने खतरा
काठमाडौं । जथाभावी एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । सन्चो भयो भन्दै मात्रा नै नपुर्‍याइ एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्न छाड्दासमेत अर्को समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । यदि तपाई चिकित्सकको सल्लाह बिनै एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्नुहुन्छ र सन्चो भयो भन्दै औषधिको मात्रा नै पूरा नगरी बीचैमा प्रयोग..
अस्पतालमा यौन हिंसा Tuesday, October 2nd, 2018
काठमाडौं । उपचारका लागि अस्पताल जाने जो–कोहीलाई पनि चिकित्सकप्रति ठूलो भरोसा हुन्छ । तर, तिनै अस्पतालमा कहिले–काहीँ अप्रिय घटनासमेत हुने गर्दछ । खासगरी कतिपय महिला बिरामीले चिकित्सक र अस्पतालका पुरुष कर्मचारीबाटै यौनदुर्व्यवहार सहनुपर्ने अवस्थासमेत आउने गर्दछ । उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले शारीरिक र मानसिक दुवै किसिमको हिंसा भोग्नुपर्ने तीतो यथार्थ..
काठमाडौँ – नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पूरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ‘टाइम्स हाइअर एजुकेशन वर्ल्ड युनिभरसिटी र्‍याङ्किङ’को वरियतामा पहिलो पटक समावेश भएको छ । समग्र विश्वविद्यालयको र्‍याङ्किङमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ‘टाइम्स हाइअर एजुकेशन’को तालिकाको ८०१ देखि १००० समूहमा रहेको छ । ‘टाइम्स हाइअर एडुकेशन वर्ल्ड युनिभरसिटी र्‍याङ्किङ’ वार्षीक रुपमा..
यो बन्छु भनेर हिड्दा त्यो बने – हिँडेको गोरेटा Monday, October 1st, 2018
काठमाडौं । नेपालका प्रथम निजी डेरी सञ्चालक इन्द्रबहादुर बस्नेतद्धारा लिखित हिँडेको गोरेटो आत्मवृतान्त पुस्तक लोकार्पण भएको छ । मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननिय खिलराजरेग्मि र कार्यक्रमका विशेष अतिथीडा. योगी विकाशानन्दले संयुक्त रुपमा आज कुञ्ज थिएटरमा विमोचन गर्नु भएको हो । पुस्तक विमोचनमा बोल्दै मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष..
के तपाइँलाई थाहा छ ? श्राद्ध १२ प्रकारका हुन्छन् | Sunday, September 30th, 2018
हिन्दू धर्ममा श्राद्ध पितृहरूलाई प्रसन्न पार्नका लागि गरिने महत्वपूर्ण कार्य हो । श्राद्ध गरेर आफ्ना पितृहरूको सम्झना गरिन्छ र उनीहरुको आत्माको शान्तिका लागि धार्मिक कार्य गरिन्छ । धर्म ग्रन्थहरूमा श्राद्धका विषयमा थुप्रै कुरा गरिएको पाइन्छ । त्यसमध्ये यसको प्रकारका सम्बन्धमा पनि बताइएको छ । सबै श्राद्धको फरक महत्व हुने गर्छ । भविष्य पुराणले श्राद्ध १२ प्रकारको हुन्छ..